ပညာရေး, ကဗျာဆရာ, ပညာတော်သင်: Katharine Lee ကဘိတ်အကြောင်း
Katharine Lee ကဘိတ်
Katharine Lee ကဘိတ်တစ်ကဗျာဆရာ, ပညာရှင်, ပညာရေးနှင့်စာရေးဆရာ, သီချင်းစာသား "တင့်တယ်အမေရိကတိုက်" ရေးသားခြင်းများအတွက်လူသိများသည်။ သူမသည်ကိုလည်းတီထွင်ခဲ့တယ်ကဗျာဆရာအဖြစ်နှင့်စာပေဝေဖန်ရေး၏သူမ၏ပညာအကျင့်ကိုကျင့်, တစ်ဦးကအင်္ဂလိပ်စာပါမောက္ခများနှင့်မှာအင်္ဂလိပ်ဦးစီးဌာန၏ဦးခေါင်းကိုအဘို့, သော်လည်းလျော့နည်းကျယ်ပြန့်, လူသိများရဲ့ Wellesley ကောလိပ် သူမ၏အစောပိုင်းကနှစ်အတွင်းရှိကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သော, ဘိတ်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဒြေခဲ့သည် အဖွဲ့ဝင် Wellesley ရဲ့ဂုဏ်သတင်းနှင့်အမျိုးသမီးရဲ့အဆင့်မြင့်ပညာရေး၏ထိုသို့သောအားဖြင့်ဂုဏ်သတင်းကိုတည်ဆောက်ကူညီပေးနေ။
သူမသည်မတ်လ 28, 1929 မှသြဂုတ်လ 12, 1859 ခုနှစ်ကနေအသက်ရှင်။ ,
Katharine ဟောင်းတစ်ဦးတစ်လထက်လျော့နည်းခဲ့သည့်အခါသူမအဖေ, အသင်းတော်တစ်ခုဝန်ကြီးအနိစ္စရောက်လေ၏။ သူမ၏ညီအစ်ကိုတွေမိသားစုကိုထောက်ပံ့ကူညီဖို့အလုပ်လုပ်သွားကြဖို့ခဲ့ပေမယ့် Katharine အနေနဲ့ပညာရေးပေးထားခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏ဝင်ငွေဖြည့်စွက်ရန်ရေးသားခဲ့သည် 1880. အတွက် Wellesley ကောလိပ်မှသူမ၏ BA ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ "အိပ်စက်ခြင်း" Wellesley မှာသူမ၏ဘွဲ့ကြိုနှစ်တာကာလအတွင်းအဆိုပါအတ္တလန္တိတ်လစဉ်ထုတ်ဝေသောခဲ့သည်။
ဘိတ် '' သင်ကြားမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသူမ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက်တာ၏ဗဟိုအတိုးခဲ့သည်။ သူမသည်စာပေမှတဆင့်, လူ့တန်ဖိုးများကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ကြောင်းယုံကြည်သည်။
1893 ခုနှစ်တွင်ကော်လိုရာဒိုမှတစ်ဦးကခရီးစဉ်နှင့်ပိုက် Peak ကနေမြင်ကွင်းကိုသူမကရေးသားခဲ့သည်နှစ်နှစ်ပြီးနောက် Congregationalist ထုတ်ဝေခဲ့သည့်ကဗျာ, "အမေရိကတိုက်တင့်တယ်," ရေးသားဖို့ Katharine Lee ကဘိတ်မှုတ်သွင်း။ ဘော်စတွန်ညနေပိုင်းကူးယူထားသောမှတ်တမ်း 1904 အတွက်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားသောဗားရှင်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့်အများပြည်သူအလျင်အမြန်ပံတောင်းကြေးနီတူးဖော်ရေးကဗျာတစ်ပုဒ်ချမှတ်ခဲ့သေးသည်။
Katharine Lee ကဘိတ်အလုပ်သမားပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် Vida Scudder အတူကောလိပ်မြို့ရွာအသင်းမှစီစဉ်, 1915 အတွက်နယူးအင်္ဂလန်ကဗျာကလပ်တွေ့ရှိခဲ့နှင့်၎င်း၏သမ္မတအဖြစ်အချိန်များအတွက်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်, သူအနည်းငယ်လူမှုရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်ကူညီပေးခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏ဘိုးဘေးပရိသတ်ယုံကြည်ခြင်း၌ကြီးပြင်းလာ; လူကြီးအဖြစ်သူမကဘာသာရေးအလွန်ကိုင်းရှိုင်းခဲ့ပေမယ့်သူမသေချာသောဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူ၏ယုံကြည်ခြင်း၌တစ်ဘုရားကျောင်းကိုမတှေ့နိုငျတယျ။
Katharine Lee ကဘိတ်တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးအဖြစ်ဖော်ပြလျက်ရှိသည်တစ်ခုကျူးလွန် ပူးပေါင်း. Katharine Coman နှင့်အတူနှစ်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိသော်အဘို့အနေထိုင်ခဲ့ "ရင်ခုန်စရာချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု။ " Coman ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်ဘိတ် "ငါ့ကိုဒါအများကြီးတစ်ခါတလေငါအသက်ရှင်လျှက်သို့မဟုတ်မရယ်ရှိမရှိအတော်လေးမသေချာဘူးကြောင်း Katharine Coman နှင့်အတူသေ။ ", ရေးသားခဲ့သည်
မိခင်: Cornelia Frances Lee က, ဆရာ, (နောက်ပိုင်းတွင်အဖြစ်လူသိများတောင်ပေါ်မှာ Holyoke Seminary မှာတစ်ဘွဲ့ရ တောင်ပေါ်မှာ Holyoke ကောလိပ် )
ခမညျးတျော: ဝီလျံဘိတ်, ကွန်ဝန်ကြီး Middlebury ကောလိပ်, ဗားမောင့်နှင့် Andover Theological Seminary မှာ, မက်ဆာချူးဆက်မှာကိုလေ့လာ
Katharine Lee ကဘိတ်အငယ်ဆုံးသမီး
အဖော်: Katharine Coman (Wellesley မှာပါမောက္ခ, 1915 ကွယ်လွန်)
Wellesley ကောလိပ်, AB 1880
Wellesley, Am 1891
Sherr, Lynn ။ အမေရိကတိုက်တင့်တယ်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Nation ရဲ့အကြိုက်ဆုံးသီချင်းနောက်ဝယ်နှိုးဆော်စစ်မှန်သောပုံပြင်။ 2001 ခုနှစျ။
Sunshine ရုပ်ရှင်နှင့်ကလေးများအတွက်အခြားအခနျးငယျ - 1890
အမေရိကတိုက်တင့်တယ်ခြင်းနှင့်အခြားကဗျာများ - 1911
Retinue နှင့်အခြားကဗျာများ - 1918
Burgess, DWB - 1952 အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အသက်အရွယ်နုပျိုသော, ဘာဘရာ။ ခရမ်းရောင်တောင်အာနုဘော်: အဆိုပါ Katharine Lee ကဘိတ်၏အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့် '' အမရေိတင့်တယ်။ ' Stacey Shuett နေဖြင့်ရုပ်ပြ။ အဆင့် 3-5 ။
အမေရိကတိုက်တင့်တယ်။ နီးလ် Waldman နေဖြင့်ရုပ်ပြ။ ခေတ် 4-8 ။
အမေရိကတိုက်တင့်တယ်။ Wendell မိုင်းနားနေဖြင့်ရုပ်ပြ။
အမေရိကတိုက်တင့်တယ်ခရစ်သည်းခြေအားဖြင့်သရုပ်ဖော်။ အဆင့် 1-7 ။
သနားခြင်းကရုဏာ Otis Warren
ပန်းပုဆရာ Edmonia Lewis ကတစ်အတ္ထုပ္ပတ္တိ
သူ Alicia Stott
Sally Hemings & သောမတ်စ်ဂျက်ဖာဆန်နှင့်အတူသူမ၏ဆက်ဆံရေး
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: Corregidor ၏တိုက်ပွဲ
Leopold နှင့် Loeb များ၏စမ်းသပ်
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: Air Chief Marshal ဆာ Keith ပန်းခြံ
ရစ်သမ် (Phonetic, ကဗြာဆနျနှင့်စတိုင်)
ပွငျသစျထဲတွင်အာရုံ - က Les Sense
ဂြာမနျတွင် podcasts များနားထောင်ခြင်း
ကောလိပ်နှင့် Conservatory အဆင့်လက်ခံရေး Music နဲ့ဒရာမာအများစုအတွက် 101
စိန့် Gerard Majella, မိခင်များ၏နာယကများနှင့်မှေးသေးသောကလေးသူငယ်များမှဆုတောင်းပဌနာ
တစ်ဦး Belly Putter အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
မန်ဂါအဆိုတော် Hiro Mashima အတူအင်တာဗျူး
စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက် Asymptotic ကှဲလှဲ၏အဓိပ္ပာယ်
Group မှတင်းနစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ: ထောင်နှင့်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးခန့်
Porgy နှင့် Bess ဇာတ်လမ်းအကျဥ်း
အစဉ်အဆက်ထားသည့် Dumbest YouTube ကိုဗီဒီယိုများ၏အချို့
ထိပ်တန်း 13 သမိုင်းဆိုင်ရာဒဏ္ဍာရီ Debunked
9 သင့် Next ကိုကားဖူးနေရမည် Features